အသုံးမချသင့်ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အသုံးမချသင့်ဘူး
Posted by ဆူး on Jul 27, 2011 in My Dear Diary | 38 comments
ဆူး စိတ်ကူး အသုံးမချ သင့်ဘူး
သင် အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင် ဘယ်လို နေမလဲ.. အဖိုးမတန်တဲ့ အရာ အတွက် ကိုယ်ကျိုး ကြည့်ပြီး သူများကို အသုံးမချသင့်တာ အမှန်ပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ ဗုဒ္ဓဂါယာ သွားတော့ စီးသွားတဲ့ လေယာဉ်က သီရိလင်္ကာ လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်ပါ။
ထိုနေ့က တခြား ခရီးသွား အဖွဲ့တွေလည်း သွားကြတာ သတိထားမိတယ်။
ဗုဒ္ဓဂါယာ ကို သွားတဲ့ လူတွေဆိုတာ များသော အားဖြင့် အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ နဲ့ ဘုန်းကြီး သီလရှင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ရန်ကုန် လေဆိပ်မှာ ကိုယ့် အဖွဲ့လိုပဲ တခြားသော အဖွဲ့ ၂ခုလောက်တွေ့မိတယ်။ သတိထားမိတာကတော့ တိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံ ကို တူညီ ၀တ်ထားကြတာပါပဲ။ ရှမ်းပြည်ဘက်က တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် အားလုံးက မျက်နှာသုတ်စောင်ကို ခေါင်းပေါင်း လုပ်ပြီး ၀တ်ထားတယ်။ ခေါင်းပေါင်းကြားမှာ ဆံထိုး ၂ခု ထိုးစိုက်ထားတယ်။ တိုင်းရင်းသား စကားပဲ ပြောနေကြတဲ့ အတွက် သတိထားမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်လာတဲ့ လူကတော့ မြန်မာ ဆန်ဆန် တိုက်ပုံနဲ့ လည်ကတုံးဝတ်ထားပြီး ဗမာလို ပြောလိုက် တိုင်းရင်းသားလို ပြောလိုက်နဲ့ ဦးဆောင်နေတာ သတိထားမိတယ်။ လေယာဉ်ပေါ် ရောက်တဲ့ အခါ အချိန်အားဖြင့် နေ့မွန်းလွဲချိန် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဘုန်းကြီး နဲ့ သီလရှင်များ လေယာဉ်ပေါ်မှ ကျွှေးတဲ့ အစားအသောက်များ မစားသုံးပဲ အချိုရည်သာ သောက်တာ သတိထားမိပါတယ်။
ထိုလေယာဉ်ပေါ်မှာ သီရိလင်္ကာ လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်မယ်တွေက တခြား လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်မယ်တွေနဲ့ မတူ တမူ ထူးခြားချက်ကတော့ အသက်ကြီးကြီး ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဆာလီဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ ဗိုက်ခေါက်ထွက်နေတဲ့ ပုံစံ ၀တ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံကတော့ အန်တီကြီးတွေ ပုံစံမျိုးပေါ့.. အစား အသောက်ချပေးတဲ့ အခါ ဘာစားမလဲ ဆိုပြီး မေးတယ် စားချင်တာ ပုံနဲ့ ပြောပြီး လက်ညိုးညွန်ပြတဲ့ အခါ ပလပ်စတစ် အုပ်ထားတဲ့ အစားအသောက်များ ဘုတ်ကနဲ စားပွဲပေါ် ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ တခါမှ ထိုကဲ့သို့သော ဆက်ဆံရေးမျိုး မကြုံဖူးတော့ တော်တော် အံ့သြမိပါတယ်။ မြင်ဖူးနေကျ လေယာဉ်မယ် ဆိုသည်မှာ ပုံစံက ခပ်သွယ်သွယ် မျက်နှာကို မှုန်ညက်နေအောင် မိတ်ကပ် အဖွေးသားနဲ့ လိမ်းကျံထားပြီး လေသံ တတ်နိုင်သလောက် ချိုအောင် ပြောပြီး အပြုအမူက နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုတဲ့ အတွက် သိမ်မွေ့ကြပါတယ်။ ထူးပေ့ ဆန်းပေ့ သီရိလင်္ကာသူ တို့ရေလို့ ပြောရမလားပဲ.. ဒီလိုနဲ့ မုန့်တွေ ချပေးတဲ့ အခါ ဘုန်းကြီး များ ကို ချပေးတဲ့ အခါ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခပ်ရိုးရိုး ဘာမေးလို့ ဘာပြောမှန်း မသိ ယူထားပြီး ဘေးနားက ဒကာကို လှမ်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါတွေကို မကျေနပ်လို့လား မသိဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတော့ အတူသွားတဲ့ ဘေးနားက ခရီးသည် နဲ့ စကားစပ်မိတော့ သူပြောပြချက်ကတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်ကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုကို ခေါင်းဆောင်တဲ့ တိုးလီဒါက ဘီယာတောင်းသောက်တဲ့ အခါ တယောက်ကို တလုံး နှုန်း ဆိုပြီး လက်ကာ ပြလို့ သူ့ အတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဘေးနားက ဘုန်းကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြီး တောင်းလို့ ဘုန်းကြီး ရှေ့မှာ ဘီယာဘူးကြီး ချပေးသွားတာ ဘုန်းကြီးကလည်း ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်း မသိ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဖြစ်နေတာ.. သိလို့ ရှက်သွားတာလား မသိပဲ ဟောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတာလား တော့ မသိဘူး။ အဲဒီ လေယာဉ်မယ် ဖြတ်ပြီး ကျော်သွားမှ သူက ဘုန်းကြီး တွေကို လက်ညိုးထိုးပြီး ယူထားတဲ့ ဘီယာတွေ လိုက်သိမ်းတယ် လို့ ပြောတယ်။ ကြားရတာ တော်တော် ထိတ်လန့်သွားတယ်။ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ခရီးသွား ခေါင်းဆောင် ခရီးသွားတွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးရမဲ့ဟာ ခရီးသွားကို အသုံးချပြီး အဖိုးမတန်တဲ့ အရာ အတွက် လုပ်ပုံက တော်တော် အဖြစ်ဆိုးတယ်။
လုံးကြီးပေါက်လှ လေယာဉ်မယ်တွေ ဒေါပွပြီး အကုန်ပစ်ပေးတာ လေယာဉ် တခုလုံး အကုန် ခံနေရတော့တာပဲ။ မြန်မာ ဆိုပြီး အထင်သေးခံရတာ အမှန်ပဲ။ လေယာဉ် တစီးလုံး မြန်မာတွေချည်းပါပဲ။ အဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ ပါတဲ့ အတွက် အခြား အပြင်လူ လက်မှတ်ဖြတ်ပြီး လိုက်စီးသူ မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။
ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ် ဆိုတာ စကားက အမှန်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
အဲဒါက.. ဘုန်းကြီးရဲ့ရပိုင်ခွင့်… အခွင့်အရေးလို့ထင်ပါတယ်..။
ကိုယ့်ကိုယ်တာ.. ဘီယာတလုံးယူပြီး.. ကြိုက်ရာလူကို ပြန်စွန့်ပေးလိုက်ပေါ့..။ မစွန့်ပဲ..အမှိုက်ပုံထဲထည့်လိုက်လည်း.. ရတာပဲ..။
အဲဒါကို လေယဉ်မယ်ကမကျေမနပ်ဖြစ်နေရင်.. လေကြောင်းလိုင်းကို ..တိုင်စာပို့..ဖုံးဆက်လိုက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ဆဲလ်ဖုံးလေးနဲ့..လေယဉ်မယ် ဆောင့်အောင့်နေတာတွေ..ဗီဒီယိုရိုက်ထားလိုက်ရင် တော်တော်အိုကေမှာ..။
ယူတုမှာ… တင်ပေးလိုက်ရင်.. ပိုတောင်လှသွားဦးမယ်..။
စကားမစပ်… တရုတ်ရဲ့ မဟာမရောဂျက်ကြီးတခု.. နီပေါကိုဝင်မယ်သတင်းတက်နေတယ်..။
၃ ဘီလီယံပရော့ဂျက်ပဲ..။ နောက်ဆို ဗုဒ္ဓဖွားရာဒေသက.. မက္ကာလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။
လည်လည်သွားချင်သူတွေ..အခုကတည်းက.. များများသွားထားကြဖို့.. တိုက်တွန်းပါကြောင်း…။
Actually, my wife asked me to go to ဗုဒ္ဓဂါယာ
But I also heard this news “တရုတ်ရဲ့ ၃ ဘီလီယံပရော့ဂျက်”
Then , I decided to go to ဗုဒ္ဓဂါယာ after တရုတ်ရဲ့ ၃ ဘီလီယံပရော့ဂျက်
even though အစစဈေးတွေလည်း တက်, but,
ဗုဒ္ဓဂါယာ will become more beautiful, more convenience & more comfortable, Isn’t it ?
Anyway, thanks China for this ပရော့ဂျက် !!!
Do you have any idea, when will this project be finished ?
ကွေးသောလက်မဆန့်မီ … ဆန့်သောလက် မကွေးမီတဲ့ …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကိုမစောင့်ပဲ သွားဖို့အဆင်ပြေရင် သွားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ် …
ဗုဒ္ဓဂါယာနေရာက သွားရတာအဆင်ပြေပါတယ် … လှလဲလှပါတယ် … သက်တောင့်သက်သာလဲရှိပါတယ် …
မဝေ ပြောတာ မှန်တယ်.. သွားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ထပ်သွားချင်ရင် သွားပေါ့.. အချိန်နဲ့ ဒီရေသည် လူကို မစောင့်ဆိုသလို.. ကျန်းမာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး အစစ အရာရာ အခွင့်အခါ သင့်မှ သွားလို့ရတာ.. ပိုက်ဆံ ရှိတိုင်း သွားလို့ မရတဲ့ လူတွေ အများကြီး.. ဖြတ်လတ်နေတုန်း သွားတဲ့ အခါ… သူများ ထက်ပိုပြီး ဒဏ်ခံနိုင်တယ်။ သွားဖို့ တိုက်တွန်းတယ်နော်။
Thanks, Wei Wei & ဆူး,
But, for this year (2011),
I already boughtatickets to visit to China ( coming Sept ).
Moreover, I planned to return to Yangon also.
So, may be next year.
ဦးလေး ဖောရင်းကြီး.. တရုတ်ပြည်လည်း လည်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာပဲ.. လမ်းကတော့ အရမ်းလျှောက်ရတယ်။ ဘယ်လို အစီအစဉ်နဲ့ သွားမလဲ မသိဘူးနော်.. တိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပေကျင်းလို နေရာမျိုးကို သွားမယ်ဆိုရင် မိုးလင်းမိုးချုပ် လမ်းကြီးပဲ လျှောက်ရတာ.. အမုန်းပဲ တနေ့ တနေ့ လျှောက်ရတယ်။
တိုးနဲ့ 12 Days Tour, Guangzhou-Beijing-Xian-Shanghai-Suzhou-Hangzhou
ဦးဖောကြီး.. ဖိုရပ်ထဲက ထွေရာလေးပါး ထဲမှာ စာပြန်ထားတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတပါးက လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဝေတဲ့အစားအသောက်ကို ငါ့ဝေစု၊ ငါ့ရပိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ယူသင့်ပါသလား…သူကြီးရဲ့၊ ၀ိနည်းနဲ့ကောညီပါသလား၊ ငါ့ဝေစု၊ ငါ့ရပိုင်ခွင့်လို့ သဘောမထားပဲ လူတွေက ကပ်လို့ယူရတယ် ဆိုရင်တောင် ကပ်တဲ့ပစ္စည်းက ဘီယာဗူးနော်…၊ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလုပ်သလိုမျိုး ၀ိနည်းကို လက်တလုံးခြား လုပ်နည်း ပေးနေသလိုပဲ၊ ဒီရွာက သူကြီးက လူဆိုးပဲ။
ဘီယာတလုံးတောင် ၀ယ်မသောက်နိုင်တဲ့လူကို ငါးခုံးမနဲ့ နှိုင်းတာ ငါးတောင် သိက္ခာကျတယ် ။
လေယဉ်မယ်ကလည်း စိတ်ဓါတ်မပြည့်ဝလို့ပါ … ။ ကာစတန်မာက ဘာပဲ သောက်မယ်ပြောပြော သူ့အလုပ်က အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှူပေးရမှာပဲလေ ။ ကျေနပ်တာ မကျေနပ်တာထား … ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရမှာ ။
လေယဉ်မယ်ဗလတောင့်တောင့်တွေထားတာ လေယဉ်အပိုင်စီးတဲ့အခါ ပြန်ခုခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့သဘော ပါမယ်ထင်တယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာက တမီလ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ရာဇဝင်ရှိတယ်လေ။ ဘီယာကိစ္စကတော့ လေယဉ်မယ်က ဘုန်းကြီးကိုအထင်မှားတာထက် သူတို့ပြန်ဖျောဖို့ ဂွင်ပြတ်သွားလို့ ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်…။
မမဆူး ရတဲ.ဘူးလေးရော သောက်လိုက်တာလား
အဲလိုကြီး လုပ်စားတဲ.သူကိုခေါင်းဆောင်ခန်.တဲ.အဖွဲ.တော. သနားပါတယ်
သူ့တရား သူ စီရင်ခံရပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ သိက္ခာကျရတာတော့ နာတယ်
I just wanna say, this information was from the third party ! CANNOT TRUST OR JUDGED unless you are one of those member.
ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးက ဘီယာ မသောက်ဖူးဆိုတာကို သီရိလင်္ကာက လူတွေ သိမှာပေါ့ .. သူတို့လဲ ထေရ၀ါဒ ပဲ .. ဒါကြောင့် အစာမကျေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်
ဘုန်းကြီးဘီယာမသောက်မှန်းသိရင်လည်း တခြားဟာလေးနဲ့ အစားထိုးပေးရင်ကောင်းမယ်
ဘုန်းကြီးက ဘီယာ မသောက်လဲ သူပေးချင်တဲ့ သူကိုပေးလို့ရတာပဲ
အစာမကျေတာကတော့ မကျေတာပေါ့ လေယာဉ်မယ်အလုပ်က ၀န်ဆောင်မူ ပေးရမှာက ပေးရမှာပဲလေ .
အဲဒီ လေကြောင်းလိုင်းက အမျိုးသမီးကြီးတွေက တကယ့်ကို လုံးကြီးပေါက်လှတွေ.. အရပ်ကြီးတွေကလည်း အရှည်ကြီးပဲ.. လူမြင်တာနဲ့တောင် အာမခံရဲပါဘူး။ ဟိဟိ..
ဘုန်းကြီး က ဘီယာတောင်းပြီး မသောက်ကောင်းသလို သူများကိုလည်း မတိုက်ကောင်းဘူး အာပတ်သင့်တတ်တယ်။ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘီယာ ဆိုတာ သိချင်မှ သိလိမ့်မယ်။ တိုးခေါင်းဆောင် လုပ်တဲ့ လူက အသုံးချပြီး ဘုန်းကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြီး လိုက်သိမ်းတာ.. အဲဒါကို သဘောမကျတာပါ.. ရသင့်လို့ ယူတာနဲ့ ဘာသာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ပြီးတော့ ပြန်လည် တွေးသင့်တယ်။
တချို့လေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်မယ်တွေတော်တော်ဆိုးတာ။ ကာတာလေယာဉ်စီးတာ အရမ်းရိုင်းတဲ့လေယာဉ်မယ်တွေ့ဖူးတယ်။ Arabic မကလေးဆိုတော့ချောချောလေးပေါ့။ Hand Carry တွေထည့်တဲ့ cabin ထဲမှာ တော်တော်လေးကြီးတဲ့အိတ်တလုံးထည့်ထားတော့ cabin ပိတ်လို့မရဘူုးပေါ့။ လေယာဉ်မယ်လေးရောက်လာပြီး ဘယ်သူ့အိတ်လဲလို့အော်မေးတယ်။ တစ်ယောက်မှမဖြေကြဘူး။ ၃ ခါလောက်မေးတော့မှ Arabic တစ်ယောက်ထလာပြီး သူ့ဟာပါလို့ပြောတယ်။ အဲဒီမှာလေယာဉ်မယ်လေးက သူ့နား နဲ့ မျက်စိကို လက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီး အသံဝဲဝဲလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်လို မျက်စိမပါဘူးလား နားမပါဘူးလား လို့ပြောတာ။ ကျမတို့တော့ ပြသနာတက်ပြီထင်နေတာ သူတို့အချင်းချင်းကျတော့သည်းခံတယ်ဆရာ။ ခရီးသည်ကတစ်ခွန်းမှပြန်မပြောပဲ သူ့အိတ်ကလေးကို နေရာသေချာချပေးတာ။ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ သူများပြောရင် ဟုတ်ပါ့မလားလို့ပြန်မေးမိမှာ။ ခုကိစ္စလည်း ဘီယာနဲ့ဆိုင်ချင်မှဆိုင်မှာနော ။ ရိုင်းချင်လို့ကိုရိုင်းတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ။
(စကားမစပ် ဆူးအတွက်မုန့်ဦးနှောက်လုပ်နည်း ကို Yin Nyine Nyaw ရဲ့အင်းလေးရိုးရာဟင်းထုတ် post က comment box မှာပေးထားတယ်နော်)
comment နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ ပထမ comment ကိုဘယ်လိုပြန်ဖျက်ရမလဲဟင်???
အဲဒီလေယာဉ်မယ်ကို ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဆက်ဆံနည်းသင်တန်းပြန်ပေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
(1) ဘုန်းကြိး ကဘီယာကို သူ့ကိုယ်တိုင်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။
(2) ဘုန်းကြီးဘီယာသောက်နေတာကို မျက်စေ့နဲ့ သူမြင်ပါသလား၊
ဒီနှစ်ချက်ကြောင့် ဘုန်းကြိးကိုရော မြန်မာတွေကိုရော အပြစ်မမြင်သင့်ပါဘူး။
ကျနော်ကြားဘူးတာက လေယာဉ်မယ်တို့ လေယာဉ်မောင်တို့ဆိုတာ သာမန်လူထက်ပိုယဉ်ကျေးပါသတဲ့။
အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံဘဲ လေယာဉ်တစ်ခုလုံးကလူတွေကို အဲလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်
အဲဒီဝန်ထမ်း အရမ်းကို မှားပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်မယ် တွေ တို့ ရွှေရန်ကုန် က ကားစပယ် လောက်တောင် မယဉ်ကျေးဘူးပေါ့ နော်။
လေယာဉ် နဲ့ ပက်သက်တာ က ကိုယ် နဲ့ တော်တော် စိမ်းနေတော့ ဖတ်ရတာ တော်တော် အရသာရှိတယ် ။
နောက်လည်း အဲလို စာလေးတွေေ၇းပါနော့။ ကိုယ် က လေယာဉ်မောင်းချင်တာ..။ ဒါပေမယ့်ကားတောင် ဟို တိုက်မလို ဒီတိုက်မလို နဲ့ မနည်းမောင်းနေရတာ။
မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ် အဲဒီလေကြောင်းလိုင်းကို မစီးတော့ဘူး..(.ပြောသာပြောရတာ ဘယ်တော့ မှ သွားမှာလဲ မဟုတ်ဘူး…:) ) တိုး ဂိုက်ကလဲ အသုံးမကျဘူး ဘီယာတွေ သိမ်းပြီး ရောင်းစားလို့ သဌေး ဖြစ်မှာ ကျနေတာပဲ..
တညင်သားကို အဲဒီ လေကြောင်းလိုင်းမှာ လေယာဉ်မောင် ခန့်ချင်လို့တဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ လေယာဉ်မယ်ကြီးတွေ နဲ့ တူတူ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ အဟိ..
အမလေး အန်တီဆူးရယ် ပြောရက်ပါပေ့ … ခိုယီးရား လေကြောင်းလိုင်းဆို တော်သေး………..:)
နေရာတိုင်းမှာလိုလို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့သူတွေ ရှိကြတာပဲနော်….
တိုးဂိုက်က ရသင့်တာထက် ပိုလိုချင်တဲ့လူမျိုး။ ရသင့်တာထက်ပိုလိုချင်ရင် ပြန်ပေးရတဲ့အခါလည်း အတိုးကြီးကြီး ပြန်ပေးရတတ်တယ်တဲ့။ ဘုန်းကြီးပြပြီး အရက်တောင်းတာတော့ အတော်မကောင်းတာပဲ။
အမ ပြောတာ အမှန်ပဲ.. ဆူးလည်း အဲဒီလိုပဲ စိတ်ထဲ တွေးမိတယ်။
Myanmar က Airline တခုက ဆက်ဆံရေးလေးလည်း ရှယ်ချင်လို့ ဆူးရေ
မေလကုန်တုန်းက လေယာဉ်လက်မှတ် ပြန်ဘို့ ကို ကွန်ဖန်း လုတ်တာ နာမည်လွယ်လွယ်လေးကို ရှာလို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ် နောက်တော့မှ အမ အသက် ဘယ်လောက်လဲလိုမေးပါတယ်
– ဘာလိုလဲ ညီမ
– အမ က ၊ကလေး လက်မှတ်နဲ့လာတာလား
– ဒါဆို အမက ဘာလို့ မစ်စ လို့ တတ်ရတာလဲ
ကျမစိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါနဲ့ ထပ်မေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်လိုလဲ ညီမ လို့
-အမက MISS လို တိုက်တယ်တပ်ထားတယ် အဲဒါကိုပြောတာတဲ့
စိတ်ထဲမှာတော့ တော်တော်ကသိကအောက်နဲ့ပါ ကလေးမှ Miss တပ်တယ်ထင်နေတာ
knowledge ကလဲမကောင်း. customer နဲ့ဆက်ဆံရေး ကလဲမကောင်း
အမရေ နာမည်ရှာမတွေ့သေးလို့ဆိုလဲရရဲ့သားနဲ့ ကိုအပြစ်ကို သူများ Miss တတ်လို့ ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်ရသေးတယ်
အမ ပြောမှ ရီရလို ဒေါသ ဖြစ်ရမလိုကြီး..
miss တပ်မှတော့ လွဲပြီပေါ့။ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါလေ…။ :cool:
နိုင်ငံခြားလဲ မဂိုးဖူး ဘူး
ဒီတော့ လေယာဉ်မယ်ကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ မတွေ့ ဖူးဘူးရယ်
အပြင်မှာတော့ ခဏခဏ တွေ့ ဖူးတယ်
ဆက်ဆံရေးကတော့ ဘုဂလန့် ပဲ
ဟိုတစ်ယောက် နဲ့ ဆင်တယ် ၊
Tour Leader ကလောဘကြီးတယ်။
ကြားက ဘုန်းကြီးမှာ မျက်နှာငယ်။